Famerenana ny fandaharam-potoana: Fanaovan-tsarimihafa mahaliana
Web2DB is a screensaver powerful and useful useful. Miasa toy ny mpanangona database izy io ary ahafahantsika mamerina mora foana ny mombamomba ireo tranonkala samihafa. Ity ravinkazo dia manangona vaovao tsy voatanisa avy amin'ny tranokala sy ny pejy HTML ary mandamina sy mamorona azy tsara. Tsy maintsy ambaranao fotsiny izay tianao hikaroka sy ny fomba tianao hamoronana ny angon-drakitrao, ary ny Web2DB dia hanatanteraka ny asany araka ny torolalana. Ny tahiry dia azo hovaina ao amin'ny format MySQL, CSV, Access ary Excel. Ny Web2DB dia manana karazana endri-javatra izay mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny webmasters, orinasa, mpandraharaha, mpandrindra, ary coders. Ny sasany amin'ireo lafiny mampiavaka azy ireo dia resahina etsy ambany.
1. Amin'ny maha-tonian-dahatsoratry ny tetikasa:
Web2DB dia miasa ho tonian-dahatsoratry ny tetikasa mahery vaika. Ny famolavolana ny tranonkala amin'ny tranonkala dia tsy mora raha tsy ampy ny fahaiza-mandamina programa. Saingy miaraka amin'ny Web2DB, tsy mila programa matihanina na code ianao satria afaka manao ny asanao tsy misy izany. Ity fitaovana ity dia hanangona, hanova na hanangona ny angon-drakitrao. Ankoatra izany, manampy amin'ny fampivoarana laminasa samihafa amin'ny data izay miasa tsara izy na dia niova aza ny fanovan'ny pejy. Ny tetikasa fanoratana rehetra sy ny tetikasam-pandraharahana rehetra vita dia vita amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
2. Mora entina manorina ny votoatin'ny votoatiny manontolo:
Azonao atao ny mametraka ny Web2DB mba haka ny tranokala manontolo na ny sasany aminy. Mahavaky mora foana ny firafitry ny votoaty manontolo, ka manome azy endrika tsara. Azonao atao ny manangana pejy vitsivitsy na tranokala iray manontolo mifototra amin'ny zavatra takinao, saingy tsy mahakivy mihitsy ny kalitaon'ny votoatiny. Ity fitaovana ity dia mety amin'ny toerana lehibe toy ny Amazon, eBay, PayPal, ary ny hafa. Ny Web2DB dia manana karazan-javatra miavaka ary manampy antsika hanatsara ny fahombiazan'ny tranonkala. Fitaovana azo antoka sy feno izy io.
3. Alefaso ny tranonkala:
Amin'ny fampiasana ny Web2DB, azonao atao ny mametraka ny endrik-tranonkala manokana sy ny endrika fisoratana anarana amin'ny Internet tsy misy olana. Azo atao ny mandefa ireo endri-tsoratra rehetra, ary ny angon-drakitra fanampiny dia azo amin'ny format CSV. Azonao atao ihany koa ny mamorona angon-drakitra mifototra amin'ny teny ampiasaina amin'ny alalan'ity programa ity ary manome ny tranonkalanao hitadiavana motera ho fampiroboroboana tsara sy hitsikerana.
4. Miaraha amin'ny tranokalan'ny dinamika:
Ny endrika hafa mampiavaka ny Web2DB dia ny fahafahana mifandray amin'ny tranonkala fototra sy manan-danja. Ny fandaharam-pandevonan-tsakafo voalohany dia tsy afaka mamoaka votoaty mora azo avy amin'ireo tranonkala miavaka. Na ny tambazotra amin'ny tambajotra web aza dia mamoaka angona avy amin'ny tranokala AJAX, fa ny Web2DB dia mamela anao hamaha ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkala dynamic. Tokony hotadidinao fa ny datin'ny AJAX ao amin'ny tranokalam-pifaneraserana dia haka fotoana kely ahazoana azy.
5. Ampio endrika hafa:
Ny Web2DB dia afaka manondrana ny angon-drakitra voarainao ao amin'ny Excel, Oracle, OleDB, MySQL, CSV, XML, ary Excel. Azonao ampiasaina koa ireo sora-dalan'ny fanondranana hanamora ny fanondranana ny angona raha toa ianao ka manana ny fahaiza-manao fandrindrana fototra. Ny Web2DB dia afaka manondrana vaovao koa Excel 2003 sy Excel 2007 ary manampy anao hametraka tanteraka ny sary ao amin'ny rakitrao. Ity fitaovana ity koa dia manome spam fiarovana, izay miantoka ny fiarovana anao sy ny fiainanao manokana amin'ny aterineto Source .